Dastuurkii Hore Iyo Qaadista Dacwooyinka Dembiyada Liddiga Ku Ah Madaxweynaha – Goobjoog News
Dastuurkii Hore Iyo Qaadista Dacwooyinka Dembiyada Liddiga Ku Ah Madaxweynaha
Sida ku qoran dastuurka KMG ah ee 2012-kii, qodobka 92aad ee maxkamadeynta iyo maamuus ka qaadista madaxweynaha, haddii lagu eedeeyo khiyaano-qaran, arrimo xadgudub ku ah Dastuurka ama sharciyada kale ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaa golaha shacabka la horgeynayaa Hindisaha xilka-qaadista Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka, waxaa golaha hor-keeni kara ugu yaraan saddex dalool hal dalool (1/3) xubnaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka, Maxkamadda Dastuuriga ayaa galaysa dhageysiga eedeyntu inay sal leedahay.
Mar haddii aaney jirin xilligan maxkamad dastuuri, oo dastuurka la isticmaalayo uu yahay mid KMG ah oo aan dhameystirneyn, waxaan dib u raacnay sida ay dastuurradii hore ka dhaheen dacwooyinka noocaan ah.
Dastuurkii 1960-kii, waxaa ku caddaa sida laga yeelayo qaadista dacwooyinka dembiyada liddiga ku ah madaxweynaha iyo xubnaha dowladda iyo cidda keeneysa. Qodobka 76aad ee dasruurkaas waxaa ku qoran waxyaabaha madaxweynaha lagu maxkamadeyn karo iyo habraaca loo marayo sida khiyaamo qaran.
1)- Madaxwaynaha Jamhuuriyadda mas’uul kama noqon doono falal lagu sameeyay iyadoo la fulinayo hawlahiisa, marka laga reebo khiyaamo Qoran oo waawayn ama isku dayo ka soo horjeedo nidaamka Dastuurka, sida uu sharci diyaariyay.
2)- Mas’uuliyadda la xirriirta xagga sharciyada Madaxwaynaha waxaa inta kale iska leh Ra’iisul Wasaaraha iyo Wasiirada awoodda u leh ee iyagu qaabilsan/ayidsan.
3)- Xaaladda ku saabasan khiyaamo Qaran oo wayn ama tallaabooyin isku day ah oo ka soo horjeeda nidaamka Dastuurka, waxaa Madaxwaynaha Jamhuriyadda dacwad loogu soo oogi karaa go’aan uu Golaha Baarlamaan ka qaatay mowduuca ay soo jeediyeen ugu yaraan shan meelood hal meel
(1/5) xubnaha Golaha laguna ansaxiyo cod-bixin qarsoodi ah oo leh aqlabiyad dhan seddax meelood laba meel (2/3) ee xildhibaanada; waxaa lagu qaadayaa maxkamadda sare oo u samaysan sida maxkamadda ugu saraysa ee caddaaladda.
4)- Xaaladaha ku xusan farqadda sare mooyaane, Madaxwanaha Jamhuriyadda lalguma qaadi karo maxkamad iyo wax ciqaab dembi ah marka laga reebo marka uu Goluhu bixiyo oggolaashihiisa, laguna ansixiyo cod-bixin qarsoodi ah ee aqlabiyad dhan seddax meelood lab meel (2/3) xubnaha xildhibanada.
5)- Ansixinta dacwad ku oogid ee khiyaamo Qaran oo wayn ama tallaabo isku day oo liddi ku ah nidaamka Dastuurka ama oggolanaasho in la bilaabo tallaabo sharci ka qaadid ee dembi kuna saabsan debmi kale ee kasta waxay u baahanayaan in si deg-deg ah loo laalo awoodaha Madaxwaynaha.
Dhinaca kale, Isla dastuurkaas, CINWAANKA II, gaar ahaan qodobbada 101aad iyo 102aad, waxaa lagu sheegay habraaca loo marayo eedeymaha ka dhanka ah madaxweyanaha marka ay ka soo gudubto golaha shacabka.
QODOBKA 101ad: DACWO
1)- Qodobada dacwad uu soo ansixiyay Golaha Baarlamaanka ee ku cad Qodobka 76ad ama kan 84ad ayaa caddayn naa qodobada lagu eedaynayo in ay galeen Madaxweynaha Jamhuuriyadda ama xubin kasta oo dowladda ka tirsan iyo cidii gacan ku siisay haddiiba ay jirto.
2)- Golaha Baarlamaanka ayaa ka soo magacaabaya xildhibaanada dhexdooda amaba bannaanka, hal ama seddax wakiil oo dembiga ku soo ooga kuwaas oo noqonaya ama fulinaya hawsha xeer–ilaaliyaha dowladda dacwad qaadista hortaalla Maxkamadda ugu saraysa oo u samaysan sida Maxkamadda Sare ee Caddaaladda.
MAXKAMADDA SARE EE CADDAALADDA
Maxkamadda ugu sarraysa oo u samaysan sida Maxkamadda Sare ee Caddaaladda ayaa wadaysa qaadista dacwadaha Maxkamadeed iyadoo lagu darayo lix xubnood oo uu Guddoomiuyaha Maxkamadda si bakhtiya–nasiib ah uga soo dhex xulayo, goobta dhagaysiga dadweyanaha, liis laba iyo toban muwaadiniin ah oo u qalma in loo doorto dibutaati ama xildhibaan. Laba iyo tobanka muwaadiniinta ah waxaa soo dooranaya Golaha Baarlamaanka billowga muddo kasta, kuwaasoo laga soo dhex saarayo dad aan xubno ka ahayn Golaha.
Cadaado: Shacabka Sidey u Arkaan Mooshinka Laga Keenay Farmaajo (Dhageyso)
Faah Faahin: Guddoomiye Mursal Iyo Xildhibaanno Kulan Yeeshay
Faysal Cali Waraabe "Yaan Laga Laaban Mooshinka Laga Keenay Farmaajo" (Dhageyso)
Kaydka Goobjoog Select Month December 2021 (24) November 2021 (142) October 2021 (168) September 2021 (194) August 2021 (169) July 2021 (150) June 2021 (128) May 2021 (125) April 2021 (158) March 2021 (182) February 2021 (165) January 2021 (255) December 2020 (267) November 2020 (166) October 2020 (168) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (365) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)